ယနေ့ပို့စ် (အောက်တိုဘာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ယနေ့ပို့စ် (အောက်တိုဘာ)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Oct 8, 2012 in Best Web Awards | 28 comments
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ရွာကြီးတစ်ရွာမှာ ….
အဖြူရောင် လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
အနီရောင် လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
အစိမ်းရောင် လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
အပြာရောင် လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
အဝါရောင် လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
အနက်ရောင် လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
အညိုရောင် လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
ထိုထိုသော အရောင်တို့ ရောယှက်ထားတဲ့ လူတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် …။
တစ်ချို့ကား ထင်းထင်း ..
တစ်ချို့ကား မှိန်မှိန် …
တစ်ချို့ကား ညအခါ မြင်ရတတ်သည့် ကြယ်များနှယ် ထင်းတစ်ချက် မှိန်တစ်ချက် …။
အချုပ်ဆိုရသော် ထိုရွာကြီးသည်ကား အရောင်အသွေးစုံလင်လှသော လူတို့ ပေါက်ရောက် နေထိုင်ရာ ဖြစ်ခဲ့လေတော့၏ …။
(ဤသည်ကား ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင် စာပါအောင် ထည့်ရေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေတော့သတည်း။)
မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု ရရှိသည့် ပို့စ်များ
ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၂ ဝင်းပြုံးမြင့် ၄၀ ကျော် ကျမရဲ့ အသည်းကွဲ တမ်းချင်း
သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၂ aung moethu ပျံကျဈေးထဲက မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်
စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၂ kyeemite ထောင်ထွက်ကြီးမိုက်…Ex-convict
၁။ ယနေ့ပို့စ် (သြဂုတ်) ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
၂။ ယနေ့ပို့စ် (စက်တင်ဘာ) ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဂေဇက်ပို့စ်များ စုစည်းမှု (အောက်တိုဘာ)
ဘဂျီးပုအမျိုး ထန်းရေအမူးကောင်းလို့ drunk ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
“လက်ခုပ်ဟူသည် တစ်ဘက်တည်းမမြည်” nicolus agral Read Here None
“မြေပုံကိုအလိပ်ဖြေလိုက်ရင် ဓါးသွားတွေပေါ်လာစမြဲပဲ” nicolus agral Read Here None
ချိန်ခွင် ( ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့သဘောလား? အိမ်လွမ်းသူ Read Here None
“အောင်ပန်းမြို့တောင်ဘက်က တိမ် အလှ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး – အပိုင်း (၆၈) မောင်ဘလိူင် Read Here None
ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင် ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်၍ ကိုခင်ခ Read Here None
နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုခင်ခ Read Here None
ညဈေးသည် aung moethu Read Here None
အတိုအထွာ Khaing Zar Win Read Here None
အသဲကွဲဖူးလား thureinmaung Read Here None
Network ပေါ်မှာ Meeting လုပ်ကြစို့ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ဗီယက်နမ် မိန်းမခါးပိုက်နှိုက်များ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ပြေးကြစို့ ကထူးဆန်း Read Here None
ခက်ပါတယ်ကွာ ပဏ္ဍိတ ဂုရု Read Here None
အိုကီနာဝါ သို့ ခရီး မိဂီ Read Here None
ဧရာဝင်္တီနှင့်ကျွန်တော် အလင်းဆက် Read Here None
အချစ်ဗေဒင် အနှစ်ချုပ် မမလေး Read Here None
တဖတ်သတ်ချစ်သူ အနှစ်ချုပ် မမလေး Read Here None
မန်းဂဇတ်သို့ သီတင်းကျွတ်ကန်တော့ပန်း ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ပေးဆပ်ခြင်း (ဖေမြင့်) ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ရွာသူားများကို ဘုရားဖူးပို့ခြင်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
လှသောယဉ်သောညွတ်နူးဘွယ်ကောင်းသောတိမ် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အူးဗိုက် ခွင့်လွှတ်သည်၊ အမြန်ပျံလာပါ စိန်ဗိုက်ဗိုက် Read Here None
“ထိပ်တုံးခြေဆင် ခရီးမတွင်သည့်နှယ်” nicolus agral Read Here None
“နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံး” nicolus agral Read Here None
စာပေဟောပြောပွဲနှင့်စာအုပ်ဝယ်ရန် သတင်းကောင်း padonmar Read Here None
-အသေစောလိုက်တာ… အဖေရယ်- စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) Read Here None
-မေတ္တာကမ္ဘာရဲ့ အနန္တကိန်းစဉ်တန်းဟာ…အမေ- စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) Read Here None
ငါကံကောင်းနေသေးတယ်-ရေးသူ ဘုန်းသုခေ (၇) padonmar Read Here None
The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network w m Read Here None
အစားမတော် တစ်လုတ် နဲ့ သေမင်း ကို ခလုတ်တိုက်ခဲ့ သူ မိုချို Read Here None
ရည်းစားစာဆိုတာ kyeemite Read Here None
Why take risk for professional magento ecom strore zipper john Read Here None
အိမ်ထောင်ရှိသည့်သူများ ဖတ်ရန်အတွက်။ ကိုခင်ခ Read Here None
ဆိုးမွေ နေ၀န်းနီ Read Here None
တိတ်တခိုး အနမ်းတစ်ပွင့် padauk moe Read Here None
ခွဲခွာချိန် padauk moe Read Here None
ဘယ်သူ ဥာဏ်အကောင်းဆုံးလဲ ? ? ? မမလေး Read Here None
ပိန်ချင်တာလား … ၀ ချင်တာလား … မမလေး Read Here None
ငါကံကောင်းနေသေးတယ်-ရေးသူ ဘုန်းသုခေ(၅) padonmar Read Here None
ဖတ်ကူ(ခွန်အားဖြည့်သံစဉ်)များသို့ padonmar Read Here None
“နွားသိုးကိုးကောင် မွှေးတောင်တစ်မျှင်ကျွတ်သည့်နှယ်” nicolus agral Read Here None
“ပတ္တမြားဆံကျိုး အဖိုးပြည်တန်” nicolus agral Read Here None
တိမ်တွေကြောင့် ပိုလှနေတဲ့ အောင်ပန်းမြို့လေး ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
“နောက်ကျသားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
((အောင်မြင်ဖို့ ဆိုရင်သတိပြုရမဲ့ အေတူဇက်)) ရွှေအိမ်စည် Read Here None
သီတင်းကျွတ်အချိန်အခါ ဘဲဥ Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၆ ) Foreign Resident Read Here None
အနှစ်သာရတူလို့ဂါရ၀ပြု ကန်တော့ကြရာဝယ် ကိုခင်ခ Read Here None
အိပ်မက်လား (၀ါ) တစ်ကယ်လေား Paauk moe Read Here None
ကျွန်တော် တွေးမိတာလေးပါ Paauk moe Read Here None
ငါကံကောင်းနေသေးတယ်- ရေးသူ ဘုန်းသုခေ (၆) Padonmar Read Here None
သူများ စာ အရီးခင်လတ် Read Here None
ဘယ်ဟာက တန်ဖိုးပိုရှိသလဲလို့ မေးလိုက်ချင်ပါသည် myanmar oscar Read Here None
ငါကံကောင်းနေသေးတယ်-ရေးသူ ဘုန်းသုခေ (၄) padonmar Read Here None
ခဏခဏ မအကြစို့နဲ့ blackchaw Read Here None
အောင်ပန်း ရဲ့ မိုးနှင်းမူန်တွေကြားက နံနက်ခင်းလေး ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
“’ဒုန်းကနဲဒိုင်းကနဲ ဘုံးကနဲ ဗိုင်းကနဲ မီးထွန်း ပွဲ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အို… မေမေ… ကိုရင်စည်သူ Read Here None
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အောင်ဆန်း ပြောစကားကို kalarlatt Read Here None
ဒီလိုလေးတော့ရှိတယ် kalarlatt Read Here None
နိုင်ငံရေးကို နကန်းတလုံးမသိသူများလေ့လာရန် အောင် လ Read Here None
မပြောင်းလဲသော မျက်ကန်းတို့ အတွင်းရေး အေးဝတီ ကြီး Read Here None
မွန်ပြည်နယ် ၊ သံဖြူဇရပ်မြို့မှ ယာဉ်တိုက်မှုသတင်း Myat Min Read Here None
အူးဗိုက်နှင့် အူးဘဇင်း အူးညာနိတ်သရ စိန်ဗိုက်ဗိုက် Read Here None
၀ါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ် မှာ တွေးမိတွေးရာ ရွှေ ကြည် Read Here None
မညီမျှခြင်း (၀ါ) ညီမျှခြင်း padauk moe Read Here None
ကြည်နူးခွင့် padauk moe Read Here None
မီးပြတိုက် Win Paing Soe Read Here None
မြို့ အောင်ပန်းက သဘာဝပုံရိပ်များ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ကားချောက် ထဲ ကျ Mobile House Read Here None
ရီဂျန်နရေးရှင်း Regeneration မောင်ပေ Read Here None
ဆောင်းရာသီအတွက် ၊ ဆားဝက်ခြံအတွက် ၊ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ အတွက် မမလေး Read Here None
ပီကေဝါးခြင်းကြောင့် သင်ရရှိနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ မမလေး Read Here None
ကျွန်တော်လက်ကမြင်းလိုက်သည် myanmar oscar Read Here None
ကျွန်တော် သွားရောက် လည်ပတ်ဖူးသော မြို့လေးတစ်မြို့မိုး မင်းသား Read Here None
ငါကံကောင်းနေသေးတယ်-ရေးသူ ဘုန်းသုခေ(၃) padonmar Read Here None
အမုန်းမီးများငြိမ်းစေချင် padonmar Read Here None
သင့်ကို အလိုရှိသည်။ saund Read Here None
ဓာတ်ပုံပညာသင်ယူစရာ သကြားလုံးကြော် Read Here None
အပျိုစင်ဘဝ တန်ဖိုးထားပါ virgin ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
“စလေအညာက ပုလွေဆရာ့နောက်လိုက်ကြွက်တွေကို တွေ့လိုက်တယ်” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အောင်ပန်းက ဆွမ်းခံချိန် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
မောင်ဝါဝါနှင့် လေခွန်တော် နောက်ဆက်တွဲ သူရဿဝါ Read Here None
ဦးနှောက် ကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းတရား (၁၀) ခု ကိုခင်ခ Read Here None
ကြုံဖူးသူမှ ယုံနိုင်မယ်-(ဇာတ်သိမ်း) may flowers Read Here None
ဗိုက်ဆီကျစေတဲ့ အစားအစာများ ကိုခင်ခ Read Here None
သင့်ကို ဝစေသော အချက်ရှစ်ရပ် တိမ်မည်း Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၅ ) Foreign Resident Read Here None
ရေဆန်စီးခွင့်ပြုပါ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
သူငယ်ချင်း ရွှေအိမ်စည် Read Here None
Android ဖုန်း ကိုင် သူ တိုင်း ဖြစ်ဖြစ် အောင် ဖတ်ပြီး Mobile House Read Here None
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ Yel Kaung Read Here None
***အနာဖတ်မကွာတဲ့ အနာဂတ်မှာ*** maung khinmin Read Here None
နန်းခင်ဇေယျာလေးနဲ့ ညားရပါစေရဲ့  …။ blackchaw Read Here None
ထင်းရှးရိပ်… ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ကရင်တာလဘော့ဟင်းလေးချက်ပါအုံး Novy Read Here None
ကဲဘယ်လိုလဲ မောင်ကုလားတို့ ဘဲဥ Read Here None
ဇရာ Khaing Zar Win Read Here None
သင်နှင့် ရယ်မောပျော်ရွှင်စရာ သစ်သီးချိုချိုများ ရင် နင့် အောင် Read Here None
ဆိုဒ်များကိုရှာချင်ရင်…။ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အဖျက်ခံရလို့ပြန်တင်တဲ့ပိုစ့် ဘဲဥ Read Here None
အညင်သာဆုံးလေးဖြစ်စေချင် candle . Read Here None
ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝတရား..။ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
How you can make android cellular program zipper john Read Here None
”ရေနွေးကြမ်း သောက်ပြီ ဗိုက်မှာပိုနေတဲ့ အဆီတွေ လျှော့ကြစို့” ကိုခင်ခ Read Here None
ယဉ်ကျေးမှုဟု ဆိုရာတွင် မွန်မွန် Read Here None
ဦးဦးဖျားဖျားလေး ယိုးဒယားက ယောက်ကျပြားလေးတွေ Foreign Resident Read Here None
ကြုံဖူးသူမှ ယုံနိုင်မယ်-၁ may flowers Read Here None
တန်ဖိုးရှိတာလိုချင်ရင် တန်ဖိုးရှိအောင်ထားပါ Khaing Khaing Read Here None
သူတို့ပြောတာ တစ်ကယ်လား အရပ်ကတို့ရေ Onyx Read Here None
မေတ္တာ တရားအတွက် မန်းဂဇက်၏ စတုထ္တခြေလှမ်း Ma Ei Read Here None
ဖ = ဖခင်တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀ အလင်းဆက် Read Here None
မေမြို့သားနှင့် မက်မန်းသီး ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ Read Here None
“ဂရုမစိုက်ဘူးကွာ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၄ ) ( D –4– London ) Foreign Resident Read Here None
တောင်ကြီးမှလက်ဆော့ခဲ့သမျှ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ရဲဥပဒေသစ် ဘဲဥလေပစ် Police ကြောင်ကြီး Read Here None
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေသူငယ်ချင်း..။ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ရချင်ရင် ပေးပါ ကိုခင်ခ Read Here None
ကောင်းနိုးရာရာWeb Site လိပ်စာများ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ယုန်သားကြော်နဲ့ ထန်း ရည် & ကျိုက် ထီး ရိုး ရဲ့ မိုး တွင်း မြင်ကွင်း မိုချို Read Here None
ကင်ဆာရောဂါ၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ ကိုခင်ခ Read Here None
“အဘိုး ပြောတဲ့ ပုံပြင်” YE YINT HLAING Read Here None
နန်းခင်ဇေယျာ လေးကလည်း ငွေစကားပြောသတဲ့ မောင်အာဂ Read Here None
ယနေ့ည ကယ်တင်ရှင် Mobile လာပြီ။ Mobile Read Here None
ဝင်ကစွပ် (သို့ )အိမ်ငှား nicolus agral Read Here None
ရခိုင်ပြည်သို့kalarlatt Read Here None
ပေးစာ Win Paing Soe Read Here None
I Am မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု Read Here None
နှလုံးသားရှိလာတဲ့အမြန်လမ်း(ရပ်နိုင်ပေ့ Applause-၂) padonmar Read Here None
အပိုဂျီး ပဒုမ္မာရဲ့ အပိုဆု padonmar Read Here None
သို့ မေမေ မိဂီ Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၃ ) ( D –3– London ) Foreign Resident Read Here None
ပြာပြာလွင်လွင် တောင်ကြီးတစ်ခွင် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
မောင်ဝါဝါနှင့် အစစ်အမှန် တန်ဖိုးနည်းဖုန်း သူရဿဝါ Read Here None
ယုန်ကလေးကနားရွက်ထောင်…..Rabbits kyeemite Read Here None
သူကြီးနှင့် ရွာရှိ လူကြီးသူမ များအား တောင်းဆိုချက် နီပေပါ(ရဲစည်) Read Here None
ကလေးလေးတွေ ပညာ တတ်ဖြစ်ဖို့တော့ htet way Read Here None
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ရယ်၊ပြုံး၊မဲ့၊ငိုင် မျက်နှာများ Etone Read Here None
လာပြန်ပြီဗျာ ဂိုဒေါင်ရှင်းတဲ့ jullies cezer Read Here None
ရွာထဲရေသန့်ရောင်းဖြစ်ပုံလေးပါ။ ကိုခင်ခ Read Here None
ချန်ပီယံလိဂ်ည ပြန်ရောက်ပြီ မောင်ပေ Read Here None
ရခိုင်ဒေသအတွင်းသို့ မွတ်ဆလင်များ ဝင်ရောက်လာခြင်းPDF ဘဲဥ Read Here None
ကရင်ပြည်နယ် သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမှ စာထုတ်ပြန် ဘဲဥ Read Here None
လွယ်ကူချက်စား ကရင်မုန့်ဟင်းခါး Novy Read Here None
မန်းလေးသားတွေပျော်တဲ့ ကျောက်တော်ကြီးပွဲစတော့မယ် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
” အကျိုးပေး မြန်ပုံ “ YE YINT HLAING Read Here None
ဝေဖန်ခြင်း အပေါ်အတွေး။ ကိုခင်ခ Read Here None
မွတ်(စ်)တို့၏သခင် မွတ်(စ်)ဂဇက်ဘုရင်ကြီးသို့လျှေက်တင်လွှာ မိုးတိမ် Read Here None
“စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်(၃၉)အတွက် အဖြေ” surmi Read Here None
ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs IX Kyaemon Read Here None
အပျင်းပြေဖို့ ပုံတစ်ပုဒ် မောင်ပေ Read Here None
♥ ♥ ♥ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးဝင်သည့် စာအုပ်များ ♥ ♥ ♥ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
နေရာများ ၏ ဆွဲငင်အား အလင်းဆက် Read Here None
“အမြဲမရှိဆိုတာမှားတယ်လို့ သက်သေပြနေတဲ့နေရာလေး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
နိုင်ငံရေး ဥဆောင်မှုတွင် ကြောင်အခန်းကဏ္ဍ ရှော့ခ်ချမည်နှင့် ကြောင်ကြီး Read Here None
စိမ်းစိမ်းစိုစို…….တောင်ကြီးမြို့ကမြင်ကွင်းများ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ချားလ် ဒါဝင်..ကြောင့်သာမဟုတ်ခဲ့ ရင်…။ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ကဲဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ??? wma Read Here None
Put forwardanew impression for zipper john Read Here None
– hide by admin – ဥဥ Read Here None
အဖေ…လား ? အမေ…လား ? ဆုံးမပေးပါ myanmar oscar Read Here None
♥ ♥ ♥ နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ လေ့လာရန် လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
တွေ့မိသမျှ မြန်မာ Blogger အကြောင်း မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ချစ်မိသူတစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အချစ်ဦး padauk moe Read Here None
သို့ padauk moe Read Here None
“အပြာရောင်ကောင်းကင်အောက်မှ တောင်ကြီးက စွယ်တော်စေတီ-၄ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ပါးစပ်ပေါက်များမငြိမ်ခြင်း koko chit Read Here None
ကျွန်မနှင့်သြကာသ လေ ဒီ Read Here None
ယူကေရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VIII Kyaemon Read Here None
ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်ကြ ဆန့်ကျင်ကြ San Hla Gyi Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၉ ) ( ဒန်ပေါက် ) Foreign Resident Read Here None
….. တရားခံ ဘယ်သူလဲ … မိုးချမ်းမြေ့ Read Here None
Miss international 2012 (One Comment) အရီးခင်လတ် Read Here None
“နူးညံ့စွာ ပြောင်းလဲခြင်း ” YE YINT HLAING Read Here None
– ပစ်စာ : Temp on hold by Admin – saline tinmg Read Here None
လယ်သမားနဲ့ ဂြိုလ်သား ရွှေအိမ်စည် Read Here None
“မထင်မှတ်ဘဲဆုံလိုက်ရတဲ့ ရှမ်းရိုးရာကပွဲလေး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
MPT ရေ မလုပ်ပါနဲ့ဟ woo warr Read Here None
အလိုအပ်ဆုံး ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၂ ) Foreign Resident Read Here None
ပန်းချီတော် ဆရာချုံ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
calculating on odds , head to head and fixtures မောင်ပေ Read Here None
ရှုခင်းသာ အပန်းဖြေဥယျဉ် ac051126 Read Here None
ဒီကိစ္စ…ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲ နွေဦး Read Here None
Latest News> Samsung ဖုန်းဝယ် မည့် သူ များ သတိထား ရန် Mobile House Read Here None
Android application မြန်မာ ဗားရှင်း များ Mobile House Read Here None
ထင်းခုတ်သမား၊ ပုရစ်ကြော်နှင့် တောဝက်သား ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ Read Here None
((( အပျိုကြီး ))) ရွှေအိမ်စည် Read Here None
သံတွဲ က တာဝန်ယူမှု ???????? Kaung Say Chin Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၁ ) ( Preparation ) Foreign Resident Read Here None
ပေါက်တယ်နော်….အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲ မှာ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
မန္တလေး စားညွှန် Khaing Zar Win Read Here None
PSY ၏ GangnamStyle အကမှာ မြန်မာ့အကကိုကူးယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ Thu Wai Read Here None
တောင်ခိုး အုံ့ဆိုင်း မြင်လေတိုင်းမိူင်းဝေေ၀….၂ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ဝုတ်..ဝုတ်.. သိပ်စိတ်ဆိုးတယ် shock ကြောင်ကြီး Read Here None
ချစ်ခြင်းတရားကို ဖွင့်ဟခြင်း လုံမမွန်မွန် Read Here None
ADSL လိုင်း ဘာလို့ ပျက် ဆူး Read Here None
“၁၅၀၀ အချစ်” နဲ့ “၅၂၈မေတ္တာ” သျှားသက်မာန် Read Here None
ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ပွဲကြီး ကျင်းပသွားရန်ရှိ။ လယ်ထွန်Z Read Here None
အူးဗိုက်နှင့် ကိုဘလက်ချော မွေးနေ့အူးဘဇင်းဗိုက် Read Here None
ရဲဇား စာ နောက်ဆက်တွဲ လယ်ထွန်Z Read Here None
ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VII Kyaemon Read Here None
ဆယ်လီဗြစ်တီ မောင်ဝါဝါ သူရဿဝါ Read Here None
Latest News>Iphone5ဖုန်းဝယ် မည့် သူ များ သတိထား ရန် Mobile House Read Here None
Finally Joomla 3.0.1 now released professional Joomla Developers zipper john Read Here None
Comment ( ၅ ) ခုရပြီးမှ ပျောက်သွားတဲ့ ပိုစ်ကို ပြန်လည် တင်ပြခြင်း မိုး မင်းသား Read Here None
အိုင်အိုဝါသားတွေ မသိစေနဲ့ (၀င်းဖေ)။ blackchaw Read Here None
“ မြန်မာနိုင်ငံမှ စပါးကြီးမြွေ ” – ဘုန်းသျှံ (လန်ဒန်ဝိဟာရ) kai Read Here None
ပ = ပဒုမ္မာ ပန်းလို..လှတဲ့ပပ၀တီရဲ့ အလှမျိုးကို အားကျတယ် အလင်းဆက် Read Here None
စိမ့်စမ်းရေတံခွန်ဖြာဆင်းနေတဲ့ တောင်ကြီးအတက်လမ်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ပါတီတွင်း ဖြုတ်ထုတ်သတ် လမ်းစဉ်နောက်လိုက်နေသော maungmoenyo Read Here None
အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဆိုတာ…နတ်စည်းစိမ်ခံနေရသူများ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
တန်ရာတန်ရာ အင်္ဂလန် myanmar oscar Read Here None
( ( ( (( လူပျိုကြီး)) ) ) ) ) ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး – အပိုင်း (၆၇) မောင်ဘလိူင် Read Here None
ပိုစ့်မော်ဒန် သိုင်းလောကရဲ့ စိန်ခေါ်သံ – ၃ လယ်ထွန် Z Read Here None
လျှို့ဝှက် ရဲဇား စာ လယ်ထွန် Z Read Here None
တခါတုန်းက Tanker ပေါ်မှာ ကိုရင်စည်သူ Read Here None
ဂဇက်တရားရုံးသို့ဦးတင်ပါသည် ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
တိုင်ပင်မထား တူညီကြရာ နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်ပါ ကိုခင်ခ Read Here None
ဒီစစ်ပွဲပြီးရင် ကျောင်း…တက်…ချင်…တယ် (မင်းခိုက်စိုးစံ) blackchaw Read Here None
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမှထံမံဆူပူအုံကြွမှုဖြစ်စေရန် areno areno Read Here None
တွေ့မိသမျှ ဘွဲ့တံဆိပ်များ ဂျူဂျူး Read Here None
ရုံးဖွင့်ခွင့် ပြုတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ဘဲဥ Read Here None
သံတွဲကိုရောက်နေတဲ့ က.ည.န ရဲ့ စာရင်းမပြ ငွေပိုတောင်းခံမှု ဝေးလွင့်တိမ် Read Here None
“တစ်ခါက နှင့်  အမှတ်တရများစွာ” surmi Read Here None
– Deleted by Admin — 10/18/12 areno areno Read Here None
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသို့သံတွဲမြို့မှအရေးပေါ်အသနားခံစာ areno areno Read Here None
မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ(၃) မိုးတိမ် Read Here None
ကျွန်တော်မသိသော ကျွန်တော်များ ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ Read Here None
တောင်သမန်ညနေခင်းကိုနုတ်ဆက်ခြင်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
Elite မှာဖုန်းဝယ်မိပါတယ် Thu Wai Read Here None
ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်သော သတင်းလေးပါ။ ကိုခင်ခ Read Here None
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအေးချမ်းလာရာမှ Nu Than Read Here None
အေ-ဘီ-စီ-ဒီ လယ်ထွန်Z Read Here None
အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် ရွှေအိမ်စည် Read Here None
မြန်မာ့ရိုးရာဖက်ရှင် ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အောက်ခြေကခိုက်နေတဲ့ အမှိုက်တွေ ရွှေရိုး (ရွှေမန်း-ဒိုင်အို) Read Here None
မင်္ဂလာရှိသောမန်နေဂျာ jullies cezer Read Here None
ကျွန်မ ချစ်သူ အာဆေ we R one Read Here None
“ဘူမိကျောင်းတော်သား” ဦး ကျောက်ခဲ Read Here None
အတွေးရထား နေ၀န်းနီ Read Here None
ADSL အင်တာနက်လိုင်း ကနဦးတပ်ဆင်ခ နှုန်းထားများကို the best Read Here None
မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ။(၁) မိုးတိမ် Read Here None
မြန်မာမှန်ရင်ဖတ်ကြပါ။(၂) မိုးတိမ် Read Here None
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း- ၆) (အပိုင်း- ၇) kai Read Here None
ပိုစ့်မော်ဒန် သိုင်းလောကရဲ့ စိန်ခေါ်သံ – ၂ လယ်ထွန်Z Read Here None
ဟင်းစပ် Khaing Zar Win Read Here None
၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် မုန်လာဥနီ shwe pont Read Here None
စေတနာအဟုတ်နဲ့ အမှန်လုပ်ပါ ကိုခင်ခ Read Here None
မဝေေ၀ ရဲ့ ………..မွေးနေ့ အတွက်လက်ဆောင် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
Admin Message Board kai Read Here None
အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများ နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း နှင့် ရလာဒ်။ ကိုခင်ခ Read Here None
မွေးနေ့ တခုမှ ပီတိ အပြုံး မျှဝေခံစားမှု အစိတ်တပိုင်း ဆူး Read Here None
ဟောပြောပွဲ “Myanmar and the FDI Issue” လုံမလေး မွန်မွန် Read Here None
ညတစ်ည ရဲ့ ရင်ခုန်သံ padauk moe Read Here None
ကာရံည padauk moe Read Here None
ဆရာအောင်ချိန်ဘွားအတွက် လက်ဆောင်+စာကြမ်းပိုး+Share padonmar Read Here None
“တောင်သမန်အင်းရဲ့အရှေ့ဖက်ခြမ်းက” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ငါတို့မှာလဲ အဘိုးရှိတယ် Thu Wai Read Here None
***လောကဓံတာလမ်း ထက် ကသင်္ခါရကားစုတ်*** maung khinmin Read Here None
Lock ကျနေသာ Facebook အကောင့် ပြန်ယူနည်း we R one Read Here None
Mobile အသုံးပြုခြင်း we R one Read Here None
ဟာသများ jullies cezer Read Here None
((သူခိုး)) ရွှေအိမ်စည် Read Here None
မန်းဂဇက်ကို စတုတ္တခြေလှမ်း လှမ်းစေချင်သည် ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
အားနာကြသူများ…။ blackchaw Read Here None
ဒုတိယမြောက် (သို့) မိုးခြွေလေညှင်း aung moethu Read Here None
ရွှေအိမ်စည်နဲ့ facebook ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ပြစ်ရက်သူရယ် padauk moe Read Here None
ပျားရည်စက် padauk moe Read Here None
နည်းတဲ့မြွေကြီးမှ မဟုတ်တာ gyinkalay Read Here None
မြတ်သောဆရာ….သူ့လိုဆရာ (၃) padonmar Read Here None
လွှမ်းမိုးခံရတဲ့အချစ် kaungsumyatsan Read Here None
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လူမဆန်စွာရိုက်နှက်မှုကြောင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး ဆေးရုံတင်ရ Thu Wai Read Here None
လယ်သမားကြီးရဲ့ လောဂျစ် (Logic) phone_kyaw Read Here None
ရမည်းသင်းတွင် မွတ်စလင်မ် အိမ်အချို့ အကြမ်းဘက် ဖျက်ဆီး မီးရှို့ခံရ ရဲမာန်ဝင်း Read Here None
ပျိုမေတို့သိဖို့ တာလီဘန်အကြောင်း marriage ကြောင်ကြီး Read Here None
ကျွန်တော်..ဖတ်ခဲ့ သော../ ကျွန်တော်…ချစ်ခဲ့သော… ကဗျာ အလင်းဆက် Read Here None
သ၀န်လွှာ padauk moe Read Here None
တက်နေ၀န်း၏အားမာန် kaungsumyatsan Read Here None
မိုးတစ်နေ့ တောင်သမန်အင်းသို့အသွားလမ်းမှာလက်ဆော့ခဲ့သမျှ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း- ၅) kai Read Here None
Onetea Twotea uncle gyi Read Here None
***တစ္ဆေအိပ်မက်များနှင့်*** maung khinmin Read Here None
လွဲချက်ကယ်မနာ.. missing not bad ကြောင်ကြီး Read Here None
မိန်းမသားဘ၀ ၀င့်ပြုံးမြင့် Read Here None
မိန်းမ….. ယူကြဦးမလား ဦးဦးပါလေရာ Read Here None
အယ်ဒီတာလို့ခေါ်တဲ့ ငပေါများသို့phone_kyaw Read Here None
ရခိုင် အကြမ်းဖက်အ၀ကျွန်း သားများကို လက်နှက်များနှင့် အတူဖမ်းဆီးမိခြင်း thein sein Read Here None
အင်ပီးရီးယဲလ် (အင်းဂလိပ်) ၊ မက်ထရစ် နဲ့ ရွှေမြန်မာ ကထူးဆန်း Read Here None
“ ကျွန်ုပ်နှင့် အမဲသားကြိုက်သော မောင်မြဖေ ” မင်းသိင်္ခ ကိုရင်စည်သူ Read Here None
တာလီဘန်တွေရောက်နေပြီ Taliban ကြောင်ကြီး Read Here None
“အချစ်ရဲ့အခြားသော ခေါင်းစဉ်…..” lin naing Read Here None
“ချမ်းမြေ့ရိပ်ငြိမ်မှ စာရေးကောင်းသူများ” TTNU Read Here None
Welcome Home အဘဖော နှင့် အမျိုးသားများ၏ ကျန်းမာရေး (သတင်း) အရီးခင်လတ် Read Here None
ဆြာအုပ် နှင့် ကိုလိုနီ ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် Read Here None
ဆားပုလင်းဆာမိ နှင့်  ဘလက် ဘရားသားဂိုဏ်း surmi Read Here None
မင်းလိုသူငယ်ချင်း..။ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
တကယ်တိုင်စေချင်ရင်(ပါရမီ-အဓိပတိ-ကုမ္ပဏီ) padonmar Read Here None
သေခြင်းတရား (ရေးဘော်ရဲဘော် မောင်ဝံသသို့) – မောင်စွမ်းရည် kai Read Here None
ကိန္နရီရုပ်လေး အလှပျက်မှာ စိုးမိပါသည် Thu Wai Read Here None
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ အလိုအလျောက် ငွေဖြတ်ခံရသော ပြဿနာ the best Read Here None
မြန်မာ့ပညာရေး တခေတ်ဆန်းပြီ Renaissance ကြောင်ကြီး Read Here None
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမျိုးသားရေး သြ၀ါဒ ပိုင်လေး Read Here None
Finance Manager တစ်ယောက်ရဲ့ အနိမ့်ဆုံးလစာ ၅ သိန်းဆိုပဲ manawphyulay Read Here None
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၏ ဂင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်လောက်သည့် အမှား ဘဲဥ Read Here None
ကားရဲ.ဦးနှောက် TT Read Here None
ကျွန်ုပ်နှင့် ရွှေဥ ဥသော ငှက်အကြောင်း မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
သကြားမပီးမဖြစ် ရေးသူများသို့ Khaing Khaing Read Here None
Android builds new and innovative applications zipper john Read Here None
-ပရဟိတဆိုတာ စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) Read Here None
-မေတ္တာကို ဘာသာပြန်လွဲမိတယ်- စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) Read Here None
ပိုစ့်မော်ဒန် သိုင်းလောကရဲ့ စိန်ခေါ်သံ – ၁ လယ်ထွန်Z Read Here None
မြင်ဘူးစေချင်ပင်မှည့်ပင် Novy Read Here None
နေတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ခြင်း ကိုခင်ခ Read Here None
မြန်မာ flash သီချင်းများ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ညမထွက်ရအမိန့်များအားအချိန်လျှော့ချ Nu Than Read Here None
ချစ်ခွင့်………… padauk moe Read Here None
“လူဖြစ်လာရ တစ်ခဏမှာ” TTNU Read Here None
ခိုးရာလိုက်တာ အပြစ်ဆိုပဲ etone Read Here None
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ ၆ ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် Read Here None
ညနေခင်းလေးများ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
Community Planning Officer အလိုရှိသည် manawphyulay Read Here None
ကျွန်တော်နှင့် ရီအင်ကာနေးရှင်းများ ရင် နင့် အောင် Read Here None
ပိုစ့်တင်ရာတွင် ဘောင်လေးတွေနဲ့ တင်ချင်များ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူများအတွက် သတင်းကောင်း manawphyulay Read Here None
မြန်မာတွေ ဘာအတွက် လူလုပ်ကြမလဲ Black Cloud Read Here None
အိုင်တီ ကုဋေရှစ်ဆယ် သူဋ္ဌေးသားပုံပြင် သူရဿဝါ Read Here None
မန်းဂေဇက်တွင် စာရေးနည်း Thu Wai Read Here None
စမတ် ရီးဇားစာ လယ်ထွန်Z Read Here None
Facebook မှပုံဟုတက်လာ တတ်သော Virus လင့်အကြောင်း ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အစ္စလာမ်သာသနာ ပြန့်ပွားမှာကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း ရဲမာန်ဝင်း Read Here None
အလုပ်ထဲမှာနေတတ်ဖို့ လိုတယ်..။ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
လေးပွင့်ဆိုင်နဲ့ ငါးယောက် (၁) လုံမလေး မွန်မွန် Read Here None
Miss International ပြိုင်ပွဲဝင် နန်းခင်ဇေယျာ ဘဲဥ Read Here None
ရင်မောမိပါသည် weiwei Read Here None
လေးပွင့်ဆိုင်နဲ့ ငါးယောက် (၂ – ဇာတ်သိမ်း) လုံမလေး မွန်မွန် Read Here None
လူငယ်များနှင့် အနာဂတ် ဦး ဗိုလ်သိန်း Read Here None
အပြစ်တဲ့လား ချစ်သူရယ် padauk moe Read Here None
“ရုပ်ရည်လက္ခဏာနှင့်သိကောင်းစရာများ” အပိုင်း(၂) aye.kk Read Here None
စိမ်းမြမြစိမ်း ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ Read Here None
ဆန်ပြုတ် နှင့်  ဟိုင်းဝေးလမ်းပ်ါက အတ္တဟိတ surmi Read Here None
ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဆော့ကစားခြင်း (Number Games) နေ၀န်းနီ Read Here None
မီဒီယာသည် ပြည်သူ့ အတွက် လက်နက်လား Black Cloud Read Here None
ဘယ်ကနေစပြီး ရုန်းထွက်ကြမလဲ? me dain Read Here None
လောကဓာတ်ဆြာဂျီး နှင့် ပန်းသီးဖီလင် လယ်ထွန်Z Read Here None
ကျွမ်းကျင်စီမံဝန်ထမ်း မ(၅)ဦး အလိုရှိသည် manawphyulay Read Here None
***ဗိုက်ပူနံကား တောင်တန်းများနဲ့ မြေပုံ*** maung khinmin Read Here None
တန်လို့လား..????? kaung kin pyar Read Here None
This is new might hit you hard to brace[…] zipper john Read Here None
မခိုင်ခိုင် နှင့် ဆရာမပြုံး တို့အတွက် လောင်ဆက် ရွှေ ကြည် Read Here None
“စိတ်မပျက်နဲ့ကွယ်…ကလေးရယ်” ရွှေအိမ်စည် Read Here None
“ရုပ်ရည်လက္ခဏာနှင့်သိကောင်းစရာများ” အပိုင်း(၁) aye.kk Read Here None
“တောကောင်သားတွေ စားရတာကိုလည်း ၀ါသနာပါတယ်” Rဇာနည် R Ga Read Here None
အလကားသင်ကြားပေးမည့် Computer Networking အတန်း သကြားလုံးကြော် Read Here None
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးသူများ မဖြုံလေနဲ့သတိထား သျှားသက်မာန် Read Here None
အူးဗိုက် နှင့် တွဲဖက်စားသောက်ခြင်း မပြုသင့်သော အရာများ စိန်ဗိုက်ဗိုက် Read Here None
“ကြာခဲ့ပြီပဲ နှစ်တွေတောင် အိုဟောင်းဆွေးမြေ့လို့“ Thaw Zin Loikaw Read Here None
န = နည်းနည်းလေးတော့ လွဲသွားတယ် အလင်းဆက် Read Here None
Human-Chicken လူကြက်ကလေးများ(သို့)မဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ် padonmar Read Here None
သပြုသီး ဆိုတာ ဒီလို အသီးကွဲ့nigimi77 Read Here None
တွဲဖက်စားသောက်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း မပြုသင့်သော အရာများ ကိုခင်ခ Read Here None
လှေကလေး ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
IT Services Full-Time ၀န်ထမ်း အလိုရှိသည် manawphyulay Read Here None
Freelance Web Designer Daily လုပ်ချင်သူများအတွက် manawphyulay Read Here None
ရင်ဘတ်ထဲက အမှန်တရား aung moethu Read Here None
အောက်တိုဘာလ အတွက် ကြိုတင်ဆုရသွားသူ ကျွန်တော် Thu Wai Read Here None
အ သော က ကျောက် စာ ပါ – မှတ် သား စ ရာ aye.kk Read Here None
Best marketing promotions and tools[…] zipper john Read Here None
စင်ကာပူက အိမ်သူကြီးတို့ သိစေဖို့ မိုချို Read Here None
စာရေးသူရဲ့ ပရိသတ်ကြီးသို့… marblecommet Read Here None
စိတ်စေရာ လုံမလေး မွန်မွန် Read Here None
သို့ …. သူငယ်ချင်း ဂျူဂျူး Read Here None
အမှတ်မရှိ….. နှလုံးသား aung moethu Read Here None
ကျွန်တော်……လူပိူကြီးပါနော်… မိုး မင်းသား Read Here None
ထူးဆန်းသောအလင်းတန်းများ cobra Read Here None
“စဉ်းစား ပေးပါဦး” YE YINT HLAING Read Here None
“ကျွန်မ ဘ၀အတွက် စံနမူနာကောင်းခဲ့သော ကျွန်မ၏ အစ်ကို” ဇာတ်သိမ်း aye.kk Read Here None
မင်းကိုနိုင် ပုလိပ်လုပ်မည် Police ကြောင်ကြီး Read Here None
ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား areno areno Read Here None
Develop your website with experts Joomla developers zipper john Read Here None
ကိုယ်ချင်းစာ နာတတ်ခဲ့ပြီ ရွှေ ကြည် Read Here None
ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ၏စေတနာ (တတိယအကြိမ်) etone Read Here None
MyanPay – Secure Online Payment စနစ် manawphyulay Read Here None
မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၇) လုံမလေး မွန်မွန် Read Here None
-ဘယ်ပစ်မှတ်ကို ချိန်ထားလဲ…လူငယ်- စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) Read Here None
နတ်ကိုင်ခံရခြင်း may flowers Read Here None
မန်းဂဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု ၂၀၁၂ ခု စက်တင်ဘာလ အရီးခင်လတ် Read Here None
အစွမ်းထက်သော ဆေးလိမ္မော် Shar Thet Man Read Here None
ကွမ်းရွက်အကြောင်းတစေ့တစောင်း Shar Thet Man Read Here None
မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (ဇာတ်သိမ်း) လုံမလေး မွန်မွန် Read Here None
Si Toneလေး ရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းလွမ်းပါတယ် si tone Read Here None
မီဒီယာလောကသား ၊သတင်းသမားလေး silver hero Read Here None
Sharapovaကြောင်ကြီး မာယာပိုကာဗြောင်တီး ကြောင်ကြီး Read Here None
7-10-2012 တနင်္ဂနွေည အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်များ Mobile Read Here None
MPT staffs are cheating baydar maung Read Here None
စွယ်တော်ပန်းဖြူဖြူ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
***ကဗျာတံငါ ရေချိုးပြန်ရတဲ့ ည*** maung khinmin Read Here None
ရွေးခြယ်မှုမှန်ရမယ့် ဆန်းဒေးည မောင်ပေ Read Here None
“ကျွန်မ ဘ၀အတွက် စံနမူနာကောင်းခဲ့သော ကျွန်မ၏ အစ်ကို” အပိုင်း-(၁) aye.kk Read Here None
ခိုးစားလို့ ချမ်းသာနေကြတဲ့ စက်သုံးဆီဆိုင်များ the best Read Here None
ဗလာ linnlinnn Read Here None
6-10-1012 စနေ ညပွဲစဉ်များ Mobile Read Here None
ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးမိပ။ ကိုခင်ခ Read Here None
စိတ် ကူုး ထဲ က “သူ” ( ၃ ) ဇတ်သိမ်း aye.kk Read Here None
အဖြူရောင်ပန်းတွေ ပွင့်ခဲ့ဖူးတယ် aung moethu Read Here None
၀န်ထမ်းကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ခြင်း manawphyulay Read Here None
ကာရံ padauk moe Read Here None
ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ အပိုင်း(၅) ၀င့်ပြုံးမြင့် Read Here None
“အညာသို့တစ်ခေါက်ဆို မျက်ရည်ကတစ်ပေါက်စို“ Thaw Zin Loikaw Read Here None
*** တောင်ကတုံးများ *** maung khinmin Read Here None
မိုးဥတုရဲ့ သာယာသောနံနက်ခင်းလေးတစ်ခု ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
လှေပေါ်မှာ လေ ဒီ Read Here None
သုညတွေပွင့်တဲ့သစ်ပင် lynnsatyar Read Here None
တိုးတုိုးလေးပါပဲ ဇွဲမာန်(အင်းဝ) Read Here None
ချန်ပူရီက ဖြစ်ရပ်မှန် (သို့) ဓာတ်မြေသြဇာရဲ့ ဆိုကျိုး Wai Aung Read Here None
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား တောလမ်း အတွေ့အကြုံ Thu Wai Read Here None
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၅) ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် Read Here None
ရွာထဲက ရှေ့နေဆိုရင် ဖတ်ပေးပါနော် (Urgent) Davit Read Here None
ဖုန်းပျောက်ရှာပုံတော် we R one Read Here None
ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရင်း အမှိုက်ကောက်ရအောင် we R one Read Here None
PHP Web Developer ခေါ်ယူခြင်း manawphyulay Read Here None
အရစ်ကျငွေပေးချေစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်သော ကြယ်စင်မြို့တော် manawphyulay Read Here None
tonight foot y Read Here None
Joomla! Web website development with effective crucial features zipper john Read Here None
ဓ = ဓါးသွားပေါ်မှာ..လမ်းလျှောက်ခြင်း… ( ဓါး…. အက်ဆေး ) အလင်းဆက် Read Here None
ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ (နိဂုံး) ၀င့်ပြုံးမြင့် Read Here None
ရဲဂျီးဘဲမြီး ဇွဲကြီးဆွဲတီး cop ကြောင်ကြီး Read Here None
” အီးဘယ်သူပေါက် မောင်ပေါက်………….. “ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
သက်သတ်လွတ် ကော်ပြန့်စိမ်း Ma Ei Read Here None
အမတ်မင်း အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် ပို့စ် blackchaw Read Here None
အဖျက်ခံရရှာသောငြမ်း that naing oo Read Here None
ခိုင်းကောင်းတဲ့နွား နှစ်လယ်ထွန်ရတတ်တယ် kaung kin pyar Read Here None
စာရင်းကိုင် ၃ဦး အမြန်အလိုရှိသည် (ရန်ကုန်) manawphyulay Read Here None
ချစ်ဇနီး thar ag Read Here None
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် DV ကံစမ်းမဲ လျှောက်နိုင်ပြီ manawphyulay Read Here None
Change, Update & Upgrade ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
ကားဟောင်းအပ်ရင်ကြုံရတာတွေ Thu Wai Read Here None
UEFA Europa League foot y Read Here None
နောင်တ aye.kk Read Here None
မောင့်လေဒီ လေ ဒီ Read Here None
အမိန့် padauk moe Read Here None
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း- ၄) kai Read Here None
ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးsurmi နှင့် ပြစ် ဆုပ် ပြန် ကမောက်ကမ ၀ါဒီဂိုဏ်း surmi Read Here None
ချီလေတဲ့ …… ချီလေ ရဲစည် Read Here None
3-10-2012 ဗုဒ္ဓဟူးည ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်များ Mobile Read Here None
ထူးဆန်းတဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန် မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
စံချိန်မမီ လမ်း တံတားဆောက် ဝန်ထမ်းများ[…] ကို သာ Read Here None
ရောင်စုံနံနက်ခင်းလေးများ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ…။ blackchaw Read Here None
Islamic Terrorists destroyed Buddhist Temples kks240979 Read Here None
ဒါဆိုရင်ကော ကူညီမှာလား။ ကိုခင်ခ Read Here None
စီးပွားရေးပညာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ပညာသင်ဆု လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း manawphyulay Read Here None
ဆင့်ပွားအလှူအတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း(ဓါတ်ပုံ) ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ဈေးကော်မတီနှင့်ကန်ထရိုက်တို့ဂွင်ရိုက်နေ Nu Than Read Here None
ကားကုမ္ပဏီတွေမှာကားဝယ်ရင် myohtat Read Here None
အသားကျ ခေါက်ရိုးကျိုး မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ထမင်းသိုးများ maung khinmin Read Here None
ချစ်သူ padauk moe Read Here None
သံယောဇဉ် နှောင်ကြိုး padauk moe Read Here None
ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ – အပိုင်း(၄) ၀င့်ပြုံးမြင့် Read Here None
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – Oct 2012 kai Read Here None
ပါရာစီတမောဆေး နဲ့ ကလေး လူရွယ် အသွယ်သွယ်အတွက် ကိုခင်ခ Read Here None
မနေနိုင်လို့ နဲနဲရေးမိသွားပါသည် မောင်ပေ Read Here None
2-10-2012 အင်္ဂါည ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်များ။ Mobile Read Here None
၂၁ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် – Screening Times kalink Read Here None
ပုံမှန်ဘဲ ကိုခင်ခ Read Here None
တောင်တရုတ်ပင်လယ် နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာ (အပိုင်း-၃) kai Read Here None
ဘွားဒေါ်က ပြန်လာနဲ့တဲ့ not welcome ကြောင်ကြီး Read Here None
သတင်းမီဒီယာ ၀န်ထမ်းနှစ်ဦး အလိုရှိသည် manawphyulay Read Here None
၀တ္ထုတိုရေးဆရာ ၀င်းဖေ ရဲ့ လက်ရာများ…။ blackchaw Read Here None
တ်ိမ်တွေနဲ့နီးအောင်အမြင့်သို့… ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
Daily Funnies Charm Boy Read Here None
မငြင်းကြနဲ့ နွေဦး Read Here None
ယူကေ ရဲ့ စီးပွါးရေး တစေ့တစောင်း UK Economy – V Kyaemon Read Here None
ဖုန်းပျောက်သွားခြင်း kaung kin pyar Read Here None
”ညအမှောင်ယံထဲမှာ” Thaw Zin Loikaw Read Here None
Funny2Charm Boy Read Here None
လိပ်ပြာတစ်ကောင်ရဲ့ ဖြစ်စဉ် manawphyulay Read Here None
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၄) ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် Read Here None
ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ VI Kyaemon Read Here None
ငပလီနှင်. ၁၄၄ Kaung Say Chin Read Here None
Etone @ ငထုံရဲ့ ရင်နာဖွယ်ရာ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်သနှစ်များ etone Read Here None
စာရေးနည်း အခြေခံ လမ်းညွှန်သင်တန်း ဖွင့်မည် lynn lynn Read Here None
မောဟမျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း၏ ရာဇ၀င် (၆) လုံမလေး မွန်မွန် Read Here None
ကားအင်ဂျင်ကို သင်ကြားပေးခြင်း TT Read Here None
ငါကံကောင်းနေသေးတယ်အပိုင်း(၂)-ရေးသူ ဘုန်းသုခေ padonmar Read Here None
မည်ကာမတ်တ Ph.D ဘွဲ့တွေနဲ့ဦးဆောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် paukpauk Read Here None
ဆိုတော့ ကျုပ်က ဘာအရောင်တုန်း သူငယ်အံရဲ့
ဘာမှ မဟုတ်ဖူး ငါ့ကို ကြိုးတွေ စားခိုင်းလို့ လာပြီး လက်စားချေတာ..
ဆိုတော့..ကြုတ်ကတော့ အဖြူရောင်ပင် ဖြစ်ချေတော့သည်တမုံ့ 
ဟုတ်တယ်လေ..ဘီအီးမှာ ကာလာမပါဘူး :harr:
မဟာဘာဂျာ အံကြီး မစိရင်တော့ ပို့ စ် ပြန်ရှာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်.နော
အံကြီးကို ဘီအီးတိုက်ကြဖို့ မမေနဲ့ 
မဟာဘာဂျာအံကြီး ဟီး ဟီးးး :harr:
ဘာအရောင်ထဲဝင်ရမှာလဲ…. နိဒါန်းတွေကလည်း ပျိုးလိုက်တာ အရောင်ကို စုံရော.. ဂယ်ပဲ…
ဒီလအတွက် ဘယ်သူဆုရမလဲဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ သိနေသလိုပါပဲလေ….
နာဂ အစိမ်းရောင်လေး.. ဘယ်တူ့ရဲ့ အာဗာတာအရောင်လေးပါလိမ့်…
တိမ်မီးခိုးဟု ဆိုကြပေသည်မလား၊ ခဏတာမြင်ရပြီး ထာဝရစာပျောက်ဆုံးနေသည့်အတွက် မီးခိုးငွေ့သာဖြစ်၏။
စကားမစပ် သဂျီးကတော့ ဝါတာကာလာတဲ့ သူများတွေပြောကြတာပဲ
အပင်ပန်းခံပြီး တင်ပေးထားတဲ့ ဒီပိုစ့်လေးအတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဟာရာဇာရေ။
ဒါနဲ့ ကျွန်မကတော့အပြာရောင်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲနော်…..
ကိုအံစာတုံးကျေးဇူးကြောင့် စက်တင်ဘာလစာမူတွေဖတ်ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်။
အဲဒီလက ကျုပ်အတော်အလုပ်များနေတော့ ဒီလိုအသင့်စဉ်ပေးထားတာသာမရှိရင် ပိုစ့်ဟောင်းတွေ ပြန်ရှာဖတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး..။
ကိုအံစာတုံးရေ ကျနော်တို့ဖြင့် အံစာတုံးသုံးတုံး ဆွဲချရတဲ့ အံဂလုံ သွားသွားဆွဲးတာ
ကိုယ်မထိုးတဲ့အကောင်ပဲ ကျတာများပြီး ဒိုင်ကစားစားသွားတယ်ဗျာ ဒါ့ကြောင့်စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ
ဒီရွှာထဲမှာရှိတဲ့ ကိုမဟာ ကိုရာဇာ ကိုအံစာတုံး ဆိုတဲ့ အတုံးသုံးတုန်းကိုဆွဲးရင်ဖြင့်
ကိုယ်ထိုးတဲ့အကောင်တွေ များများကျပြီး အမြတ်များရလေမလားလို့ . . .
ကြုံတုန်းတခုလောက်ခိုင်းလိုက်ဦးမယ်။ ပိုစ့်တွေကို data sort လုပ်သလိုမျိုး Author, date တွေနဲ့ ပြန်ရှာနိုင်ရင် ပိုမိုပြီးအဆင်ပြေလွယ်ကူလေမလားလို့။ အဲ….ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် ။ အကြံပေးတာ။
အနက်ရောင် မှ အနက်ရောင်ဟေ့။
မမမဲ လို့တောင် နာမည်ယူထားတာ။
အရီးကအနက်ရောင်တဲ့ လာထား မိရွှေကြည်က အဖြူရောင်ဗျား :harr:
ဘာမှမဟုတ်တဲ့ စာရေးထားသေးလို့ပဲ အတော်လေး စဉ်းစားယူလိုက်ရတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက ရေကို အရောင်အဆင်း အနံအရသာမရှိလို့ ရေအကြောင်းသင်ခဲ့ရတယ်။
အရင်က ရေကို အဖြူရောင်လို့ ထင်ခဲ့တာ။
ရေအကြောင်းသင်တော့မှ ဆရာမက နွားနို့က အဖြူရောင်၊ ရေက အရောင်မဲ့လို့ နှိုင်းယှဉ်ပြတာကို မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်သွားတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း အစွန်းလွတ်အောင် colorless ဖြစ်ချင်တယ်။
လောကကြီးမှာ အကူအညီလိုနေသူက လာတောင်းလို့
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် စိတ်ပါလက်ပါ ၀င်ကူညီတတ်တာ..`အဲဒါကတော့ တကယ့်ကို
မဟာရာဇာ အံစာတုံး ဟု ကလောင်အမည်ရှိလေသော လူငယ်လေးမှာ
ပြောရအုံးမယ်…ကြီးမိုက်က ရောင်စုံသူပုန်ပါ။ :harr:
“အကောင်းဆုံးစံပြလူသားပါ မဟာရာဇာ အံစာတုံး”
( CLAPS WITH A STANDING OVATION)
YES, I ONE HUNDRED PERCENT AGREE WITH YOU, KO KYI MIKE!
အဲ့လိုဂျီးဒေါ့ လုပ်ဂျဘာနဲ့ ခည …
အနော်က အာပလာ ကောင်ဘာ ခည …
ဟိုး မန်းဂေဇက် စကထဲက ပို့စ်တွေပါ အခုလို လင့်ခ်မှတ်တမ်း လုပ်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ရေးထားသမျှရဲ့ ငါးပုံတပုံလောက်ပဲ ပြန်ဖတ်လို့ရတော့တယ်။ အကယ်၍ ကျနော်တို့လို ပို့စ်တင်သူဖက်က လင့်ခ်ရှာတဲ့နေရာ ကူညီနိုင်တာရှိလည်း လုပ်ပေးပါ့မယ်။
တလက်စတဲ့ အရီးလတ်ပြောတဲ့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို မဟုတ်ဘဲ ရွာသားတဦးဦး မှတ်ချက်ကို reply လုပ်တဲ့အခါ အဲဒီလူကို တိုက်ရိုက်မှတ်ချက်ပေးသလို သူ့အီးမေးလ်ထဲကို ဝင်လာတာဖြစ်ရင် ကောင်းမည်ဆိုတဲ့ အဆိုကိုထောက်ခံပါတယ်..။
အရီးလတ် ပို့စ်မှာ အန်တီပဒုမ္မာ ပြောခဲ့သလို
ကိုယ့် ကွန်မန့်ကို Reply လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ
ကိုယ့်မေးလ်ထဲ ပို့ပေးတဲ့ ကိစ္စကို ကျုပ်လည်း ထောက်ခံပါတယ် …
ဒါလေး လုပ်ဖို့က …
WP ရဲ့ ‘follow comments” option ကို သုံးရင် ရနိုင်မလားပဲ ခင်ဗျ …
မန်းဂေဇက် အစကတည်းက ပို့စ်တွေကို လင့်ခ်မှတ်တမ်း လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့
ကျနော့် အနေနဲ့ ပြောရရင် မလွယ်လောက်ဘူး ထင်တယ် ခင်ဗျ …
သူကြီး အနေနဲ့ ဆိုရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် ..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူကြီးက ဂေဇက်ကို ဘယ်ပို့စ်နဲ့ စခဲ့တယ် …
(Hello World! တော့ ဟုတ်ဖူးပေါ့နော့ )
ဘယ်အချိန်က စခဲ့တယ် ..
စသည်ဖြင့် ဂေဇက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေကို သိရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်လို့ပါပဲ ခင်ဗျာ …
မန်းဂေဇက်ဒေါ့အိုအာရ်ဂျီ ဆိုတာ ရှိသေးသဗျ..
ပိုစ့်အဟောင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင် အဲ့သည့်ထဲ သွားဖြဲယဲရှာရတာပဲ..
ခုတော့ ဒေါ့ အိုအာရ်ဂျီ ကို ၀င်ရင် ဒေါ့ကွမ် ကိုပဲ ပြန် ရီဒါရိုက် လုပ်တော့တာရယ်..
ကိုကိုကြောင် ပေါသလို ဒေါ့ကွမ် မှာက
အော်သာ နိမ်းအလိုက် ရှာရင် ခပ်နည်းနည်းဘဲ ထွက်ကျလာတာက
ဆိုက် ပါဖောမန့် ကောင်းအောင် ဒေတာဘေ့စ်က ပိုစ့်အဟောင်းတွေ ဖြုတ်ချထားတယ်
လင့်ခ် သိရင်တော့ ရှာဖတ်နိုင်ပါသေးကြောင်း .. မပျက်သွားပါကြောင်း ..
ဘက်ကပ်တော့ သိမ်းထားတယ် (ဒေါ့အိုအာဂျီမှာ) လို့ ယူဆမိပါကြောင်း..
(သဂျီးကို အထင်မစမောနဲ့ နော ..အင်းနားဂျွိုင်းဒေ လက်ဖ်ဂျွိုင်းဒေ ထရစ်ဂါးဒေ
ဂျွတ်စ်ပုံ ရတယ်..အက်စ်ကျူအယ်လ် အရေကျိုသောက်ထားတာ ….)
ကောမန့် နိုတီဖီကေးရှင်း ကိစ္စကတော့ .. ပရိုဖိုင် မှာ အီးမေးလ် အပါအ၀င်
အခြား သော အက်စ်အန်အက်စ် တွေကို ဖြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်
သိနိင်မည် ထင်ပါကြောင်း .. (တချို့လည်း အမှန်ဖြည့်ထားရဲ့)
ကျနော်ကတော့ ပေါက်ကရ ဖြည့်ထားတယ်.. ဟီးးးး
ဒေါ့အော့ဂ်မှာ အရင်က သွားရှာဖူးပါတယ်။ ဒေါ့ကွန်းနဲ့ မထူးပါဘူး၊ အတူတူပဲ အရင်ပို့စ်အဟောင်းများ ရှာမရပါ။ လင့်ခ်လည်း သိမ်းမထားမိတော့ ခက်တယ်၊ ကိုယ့်စက်ထဲမှာတော့ ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းထားတာတော့ ရှိပါတယ်။ လစဉ်ပို့စ် တင်သလို လုပ်ပေးနိုင်ရင် အရင်ရေးခဲ့သမျှ အလဟဿ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ စာပေ နိုဗယ်လ်ဆုဆိုတာ လက်ရှိရေးတဲ့စာကို ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး၊ တသက်လုံး ရေးထားတာကို ကြည့်တာလေ၊ အကယ်၍ ပို့စ်အဟောင်းတွေကို သူတို့လူဂျီးတွေ မဖတ်မိရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မတုံး။ ဒေါ်လာ ၁.၂သန်းဂျီးများတောင်….. :eee:
ဆိုလည်း.. ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ… com ကို org ပြောင်းယုံပါ..။
ပို့စ်အဟောင်းရှာချင်ရင်.. Admin panel ထဲ.. ယူဆာနာမယ်ကို လလစ်လုပ်လိုက်၇င်.. အဲဒီယူဆာရဲ့ ပို့စ်အကုန်ပြပါတယ်..။
အခုပြသနာက.. ဆရာစွမ်းကဗျာကို..ဆရာစွမ်းကိုယ်တိုင်ပို့လာလို့တင်ထားရာမှာ.. သူကိုယ်တိုင်လာဖတ်နေလောက်တာမို့.. ဖတ်ရင်.. အဆင်ပြေပါ့မလား.. ဆိုတာပါ…။
အဲလိုဆိုလည်း အများသိအောင် ဆိုက်တနေရာရာမှ ထင်ထင်ရှားရှား ကြော်ငြာပေးထားပါလား သဂျီးရယ်…။ ခုတော့ သူများသားသမီးကို ယူထားပြီး အမှောင်ထဲ ပစ်ထားတယ်၊ သူလိုရင်တော့ ဗီယာဂယာ အတောင့်လိုက်မျိုပြီး အဆီပြန်နေတဲ့နှာခေါင်းဂျီးနဲ့ အတင်း… အဟင့်… :eee:
အားလုံးပဲ ခင်ဗျာ …
ကျနော် ခရီးထွက်စရာ ရှိနေလို့မို့
ချစ်သော ရွာသူားအပေါင်းကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဗျို့ …..
လမ်းကြုံတုန်း ကဗျာလေးကိုပါ ရေးထည့်လိုက်ပါကြောင်း …
အဖြူလည်း မဟုတ် …
အနက်လည်း မဟုတ် …
ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ကောင် ……။
ခပ်ညံ့ညံ့ ကောင် ……။
ကျင်လည်စွာ မပျံသန်းတတ် …
ကျွမ်းကျင်စွာ မကူးခတ်တတ် …
စာဖွဲ့လောက်အောင်လည်း မပြေးတတ် …
ကျနော်က ခပ်ညံ့ညံ့ ………….။
တစ်ခါတစ်ခါတော့ လဲ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် က ပိုပြီး ပေါက်မြောက်ပါတယ် မောင်အံရယ်။
Onyx = မဟူရာလို့ ပြန်လို့ရတဲ့ အတွက် ……